GOOSEBERRY "INVICTA": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, SAWIRRADA, BEERITAANKA IYO DARYEELKA - BEERTA
Casriga kala duwan ee "Invicta" waxa loola jeedaa noocyo badan oo waaweyn oo jilicsan oo leh xilli hore. Kala duwanaanta noocaas ah waxaa loo tixgeliyaa mid caadi ah, taas oo la baro. Invicta waa mid aad u caan ah beeralayda, noocyo badanaa waxaa loo doortaa warshadaha warshadaha iyo beerista beeraha gaarka loo leeyahay. Cuntada sare iyo sifooyinka midhaha, unpretentiousness iyo caabbinta cudurku waxay sharxaan waxyaalahan badan ee noocyada kala duwan.
Maanta waxaan baran doonaa sida loo abuuro bakeeriga dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh goobtaada.
Maanta, Invicta waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee miro yar ee Europe. Kala duwanaanta noocaan ah waxaa laga soo raray UK, halkaas oo weli loo adeegsado beerista warshadaha ee berry.
Diyaarinta Invicta, noocyada Resistanta (Resistenta), Winkhams (Whinhams) iyo Kipsak (Keepsaake) ayaa la soo dhaafay, kaas oo uu dhaxlay sifooyinka ugu fiican.
Next, waxaan tixgelinaynaa sifooyinka ugu muhiimsan ee duurka iyo berry, iyo sidoo kale noocyo guud ahaan.
Kordhi ilaa 120-160 cm, aad u dhaqaaleysi, aad u ballaadhan. Maqalku waa mid toosan, dhumuc dhexe, oo leh bulaacado xoog leh, laakiin ma joogaan marar badan. Caleemaha waa cagaar mugdi ah, dhajis, mid dhexdhexaad ah, dhalaalaya. Buundooyinka ayaa si dhakhso ah u koraya, taas oo ah in la tixgeliyo marka la beero.
Soo ogow qaababka berylka "Beryl", "Spring", "Honey", "Krasnoslavyansky", "Consul", "Malachite", "Grushenka", "Taliyaha", "Kolobok".
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee la tixgeliyey waa miro. Waxa lagu gartaa size weyn - celcelis ahaan, miisaanka berrida waa 6-7 garaam, halka ay u eg tahay cabbirka yar yar. Waxaa jira miro badan oo culeys badan (ilaa 10-12 garaam).
Miraha waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, ilaa 2.5 cm dhererka, midabka midabkiisu yahay huruud-cagaaran marxaladda dillaac ama midab-beereed marxaladda baaluq buuxda. Dareemku waa cufan, dhuuban, oo ku daboolan nalka fudud, saxarka ayaa udub dhexaad u ah, dhanaan-macaan.
Fikradaha miro-geedka "Invicta" waxaa ku jira qayb ka mid ah fitamiinada iyo macdanta: fitamiinada C, A, P, koox B, cusbada potassium, magnesium, sodium, copper, kalsiyum iyo fosfooraska. Sidoo kale ku jira qeyb ka mid ah boqolkiiba halaad ee sonkorta (ilaa 13%), pectins, malic iyo acids.
Ma taqaanaa? Gooseberry (miro yar oo ingiriisi ah), "Masiixa", farabadan oo caan ah - magacyada sida Ingiriis, Jarmal iyo Talyaani ah ayaa la siiyay miro yar. Asal ahaan magacyadani weli lama sharraxin afafka.
Wixii kala duwan ee miro yar "Invicta" waxaa lagu gartaa sifooyinka soo socda ee miro iyo dhir dabiiciga ah ee arrimaha kala duwan ee dibadda.
Invicta waxaa lagu gartaa caabbinta sii kordhaya ee xayrta budada iyo cudurrada kale ee caadiga ah ee gooseberries. Si kastaba ha noqotee, haddii xaaladaha xabsiga la jebiyo (tusaale ahaan, marka ay duurka ku beeriayaan ciidda qoyan ee aadka u daran ama goorta la qoyan yahay sababtoo ah waraabin joogto ah), khatarta cudurku si weyn ayuu u kordhaayaa. Sidoo kale, beeralaydu waxay xusuusiyaan iskudhufka noocyada kala duwan ee cayayaanka dalagyada miraha.
Gooseberry waa geedka-qoyan-jecel, laakiin joojinta biyaha ee waa wax burburin. Sidaa darteed, inta lagu jiro xilliga abaarta, biyaha lagama maarmaanka u ah waa lagama maarmaan. Heerkul hoose "Invicta" si fiican u dulqaadan karo, waa la ogol yahay in lagu koriyo aagagga u dhaxeysa 3-4, taas oo ah, duurka waxay u adkeysan karaan heerkulka illaa -40 ° C. Guud ahaan, noocyada kala duwan waxaa lagu tilmaamaa iska caabin si xag-jir ah.
Soo ogow nooca gooseberry waa caan ah, taas oo gooseberries waxaa loo yaqaan calllessless.
Iyada oo daryeel ku habboon hal xilli xilli ka soo baadiyaha ka heli kartaa ilaa 7 kg ee berry. Fruiting wuxuu ka bilaabmaa tobankii sano ee la soo dhaafay ee Juun - qeybtii hore ee bisha Luuliyo, waxay udbataa midho cusub illaa qaybta hore ee bisha September. Goosashada ugu horeysay ee beeritaanka waxay dhacdaa 2-3 sano.
Labada sanno iyo laba illaa saddex sano jir ah waxay dhalaan miraha. Wax soo saarka beeraha ayaa weli ah heer sare oo ah 12-15 sano, taas oo ah sababta ay ugu yeedheen kuwo dheer.
Inkasta oo maqaarka jilicsan, miraha si fiican loogu dulqaado gaadiidka, ha ku xoqin xittaa kaydinta dheer. Berry waxay si aad u u dulqaadan by by baraf, marka qasacadaysan guud ahaan, hayn qaabkooda iyo karkarin jilicsan.
Waa muhiim! Isku darka soo ururinta berry waa suurtagal. Markaad gacanta soo qaadato, hubso inaad gashato gacmo gashi.
Berry ayaa lagu qeexay kala duwan yihiin universal. Waxaad u isticmaali kartaa marxaladaha kala duwan ee qaangaarka ah - laga bilaabo berry dhirta aad heshay waxtarka wanaagsan, saxmadda iyo ilaalinta. Miraha mataanaha ah ayaa la wada cunaa macaan sida macmacaan, oo lagu daray buuxinta keega, iyo suugada waxaa laga sameeyey iyaga. Gooseberry waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu sameeyo guriga jelly, marmalade, marshmallow, khamri iyo casiir.
Waxaa xiiso leh in la ogaado: waa maxay faa'iido ka mid ah berry miro, sida loo diyaariyo gooseberries jiilaalka, sida loo soocayo gooseberries, sida loo sameeyo macaanka, macaanka, khamri guriga, khamriga sirta.
Si aad u hesho waxyaabo tayo sare leh, soo iibso geedo oo kaliya guryaha xanaanada gaarka ah ama dukaamada beeraha.
Marka aad iibsato geedo leh nidaam xidid furan (oo aan ku jirin weelka), fiiro gaar ah u yeesho astaamaha tayada muhiimka ah:
Nidaamka Rootka: ilaa 15 cm.
Tirada xididada ugu weyn: 2-3 rodol.
Dhererka qaybaha anteenada: 30-40 cm.
Tirada caleemaha: 1 (geedo sanadle ah), 2 (geedo laba sano jir ah).
On geedo waa in aysan aheyn wax farsamo.
On caleemaha waa in aan koraan caleemo.
Geedo waa in aan la qalajin, caafimaad leh, hoos cufan waa in cagaaran, qoyan, hilib cusub.
Qoryaha looxa waa in la xidho.
Marka aad iibsato geedo weelasha, da'da qalabka beeraha ma ciyaaro door muhiim ah. Geedo ku jira weelasha waxaa lagu kaydin karaa wakhti dheer iyada oo aan laga helin transplanting, halka aad u baahan tahay inaad si joogto ah u qoyso ciidda.
Baro shuruucda beeritaanka, taranta, jarida gooseberries.
Marka aad dooranaysid geedo shuban, shuruudaha tayada ayaa kala duwan:
Caleemaha waa in lagu daboolaa caleenta.
Caleemaha waa inay gaaraan 40-50 cm.
Dhererka xididku waa 15 cm.
Qodobbadu waa inay si adag ugu fariistaan ​​weelka (damaanad qaadka ah in nidaamka xidid wanaagsan oo la sameeyay), laakiin xididada waa inaysan ku jebin meelaha godka ku jira ama ugu sareeya, maadaama ay tani muujinayso muddada dheer ee content ee dheriga.
Haddii aad rabto inaad koriso miro-goosta oo aad ka hesho dalag hodan ah duurka, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u dooratid goobta soo degta oo aad abuurto shuruudo la aqbali karo geedka.
Iftiiminta kiiskan ma ciyaari doono kaalin gaar ah, maadaama Invicta ay awooddo inay koraan oo ay u dhasho midho wanaagsan si heerar kala duwan. Natiijada si isku mid ah waxay noqon doontaa sidii markii laga abuuro meel qorrax leh, iyo in kale, sida hadhuudhka ah, tusaale ahaan, farjiga ka soo baxa timaha.
Laakiin waa in ciidda iyo shuruudaha qoyaanku ay adkeeyaan: waa inaad doorataa bacriminta, ceelka si fiican loo miiray. Kuwa ugu habboon waa loamy ama sanduuqyo ciid.
Waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo meelo ka mid ah dhacdooyinka ugu dhow ee biyaha, dhulka qoyan. Gooseberry uma dulqaadanayo biyaha joogtada ah, sidaas daraadeed, meelaha roobka, ama biyaha kulul, waa in la beero dhirta sidoo kale waa in aysan noqon. Daaridda waa in laga ilaaliyaa dabaylaha iyo qoraalada.
Ma taqaanaa? Ka hor intaan la gaadhin Maraykanka (qarniyadii XIX-XX), noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee berry ah ee ku saabsan 50-80 g, Si kastaba ha ahaatee, Dunida Cusub, dhirta waxaa lagu dabiiciyay wax xayawaan ah, oo burburiyey badi noocyada kala duwan. Noocyo cudurrada u adkaysta casriga ahi ma laha sifooyinka noocan ah ee berry sidii noocyada hore.
Dhaqanka beeritaanka waxaa la fuliyaa xilliga dayrta iyo gu'ga. Si kastaba ha ahaatee, for beeralay badan oo, beerto dayrta waa la doorbidi karaa, tan iyo heerkulka hooseeyo geeddi-socodka samaynta iyo aasaasida nidaamka xididka nidaamka si fiican u socdaa, inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxa uu noqonayaa mid xoog leh, iyo ciidda u dhow geedo waa is dulfuulan.
Marka natiijooyinka beeritaanka guga ay sidoo kale noqon doonto mid wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u muhiim ah in la aaso miro yar oo ah wakhtiga u dhexeeya barafka carrada iyo bararka burooyinkeeda on geedo. Haddii aad ku daahdo beeritaanka, dhirta ayaa si xun u roon.
Cayayaanka ayaa diidi kara dhammaan dadaallada lagu ilaalinayo dhirta, waxay bartaan sida loo ilaaliyo miro-khudaar ka soo cayayaanka.
Sidaas, sida ku qoran shuruudaha taariikhda, waqtiga ugu wanaagsan ee beerto waa bilowga Maarso ama qeybtii hore ee Sebtembar, ka hor bilawga ah ee barafka. Inta lagu jiro beeritaanka dayrta, booska waa in loo diyaariyaa dhowr bilood, iyo inta lagu jiro guga, waxaa lagula talinayaa in la fuliyo shaqada diyaarinta xilliga dayrta.
Ceelka dhulka waa inuu ahaadaa cabbiraha noocan oo kale ah - 50x50x50 cm, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo masaafada u dhexeysa duurka - 1.5 m, masaafada u dhaxeysa sariiraha - ugu yaraan 1 m.
Next, waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso ciidda beeritaanka. Dunida qoday waxay u baahan tahay in lagu qaso Bacriminta sida:
200 g oo ah superphosphate;
40 g oo ah cusbo cusbo (300 g oo ah ash alwaax ah ayaa la beddeli karaa);
100-300 g oo ah xumbo cufan.
Haddii ciidda ay tahay mid dufan badan oo culus, waxaad ku dari kartaa dhowr baaldiyo oo ah peat. Geedka geedo u baahan yahay si loo ogaado qoorta xididka: marka la beero, waxay ujiraysaa ciidda 6 cm. Dhirta la beero waxay u baahan tahay inay noqoto mid qumman, iyada oo aan la gooyin. Ciidda waa in la is dul saaraa oo u waraabiyaa si aad u badan (ilaa 5 litir oo baadiyaha ah).
Soo ogow waxa calaamadaha cudurka miro-barkiisa.
Tan iyo "Invicta" waxay koraan keynta iyo baadiyaha waaweyn, hubi inaad dhisto qalab. Si arrintan loo sameeyo, dhoobada birta leh dherer ahaan 150 cm waxaa lagu rakibay cidhifyada sariirta, xargaha wareegsan ayaa lagu dul taagay heerkul ah 100 iyo 150 cm, taas oo laamihii duurka u xidhxidhnaa.
Duurka dhalinyarada ka dib beerashada, iyo sidoo kale dhirta qaangaarka weyn waxay u baahan yihiin inay bixiyaan daryeel ku filan inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Sida aan hore u sheegnay, miro-dhoosku wuxuu u dulqaadan karaa abaarta muddada gaaban, si kastaba ha ahaatee, si uu u helo miro ballaaran iyo midho xajin leh, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo heerka qoyaanka ciidda heer sare. Waa suurtogal in la go'aamiyo in qolka dhulka dhoobo ay ku filan tahay, marka loo eego baaritaanka noocan oo kale ah - markaad ciidda ku qaadato gacmaha, waxay si fudud u burburinaysaa taabashada farahaaga, waxay dareemeysaa qoyaan taabashada, laakiin ma maqaarka maqaarka mana haysanin balaastiig, sida dhoobada, sababtoo ah qoyaan xad dhaaf ah.
Marka waraabiyo, ciidda ka hooseysa geedku waa in la qoyaan si qoto dheer oo qiyaastii ah 40 cm, iyada oo ku xiran da'da iyo xajmiga geed, 2-4 baaldiyooga dhirta loo baahan yahay. Wixii waraabinta u isticmaasho heerkulka kuleylka xagaaga, sida caadiga ah kala tag ama roob.
U hubso inaad u baahan tahay waraabinta marxaladaha sida:
marka la sameynayo ugxan iyo caleemo (dhammaadkii Maajo - bilowga Juun);
bisha Sebtembar si loogu diyaariyo nidaamka xididka jiilaalka.
Waraabinta waa in ay ahaato mid u dhow sida ugu suurtogalka ah ee ciidda, iska ilaali qoyaanka on caleenta.
Markaad sameysid ugxan sidaha, waa inaad si taxadar leh ula socotaa heerka qoyaanka
Wixii fruiting wanaagsan u hubi in ay daryeelaan ciidda. Daryeelka waxaa lagu yareynayaa hababka noocan oo kale ah: dhirta, qashin ama dabacsan, mulching ka dib waraabiyo.
Waa lagama maarmaan in la qodo oo la daboolo ciidda si kor loogu qaado hawada iyo qoyaanka. Waxaad isticmaali kartaa majarafad for qashin, laakiin loosening u baahan yahay in la sameeyo si aad u hufan - saqafka beerta yihiin ku habboon yihiin.
Ka saaridda cawska ayaa sidoo kale ah caleemo qulqulaya oo muhiim ah oo hoos yimaada baadiyaha waxay kordhisaa qoyaanka hawada, taasoo kicin karta horumarinta cudurrada fangas.
Waxyaabo kale waa mulching: waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso heerarka loo baahan yahay qoyaanka ee ciidda iyo ka hortagaan xad-dhaafka ah ee clod ah dhulka. Hay, caws, dhadday, peat waxay ku habboon yihiin mulch. Loosinta iyo jaridda dhirta waa in la fuliyaa ugu yaraan hal mar bishii.
Waa muhiim! Nidaamka xididka miro-geedku wuxuu ku dhawdahay dusha sare, markaa waa lagama maarmaan in si taxaddar leh loo daboolo si sax ah hoostiisa, si qoto dheer oo aan ka badnayn 6-8 cm.
Bacriminta waxay u baahan yihiin ugu yaraan laba jeer sannadkii. (xaddiga ku xiran bacriminta ciidda ee aaggaaga):
markii ugu horeysay ka dib ubax si ay u kordhiyaan dhalidda;
markii labaad ka dib qaadashada berry si ay u diyaariyaan baadiyaha ee jiilaalka iyo xilliga soo socda ee fruiting.
Wixii quudinta koowaad ee isticmaalka ugu wanaagsan ee arrinta organic: Doodwanaag ama qashin. Waxay ku qulqulayaan biyaha marka loo eego 1:10 ama 1:20, siday u kala horreeyaan. Marka xigta, samee carrada xisaabtarkan - 1 digrii. m waxay u baahan doontaa baaldi 10 litir oo ah mullein ama 5 litir oo xal qashin ah.
Si sahlan u sameynta dhar xidhashada duurka, waxaad samayn kartaa canjeero gacmeed oo adoo isticmaalaya qashin, ku shub bacriminta iyaga, kadibna qallaji, buuxi carrada.
Dharka macdanta waxaa la sameeyaa ka dib markaad qaadato berry. 10 litir oo biyo ah, 10 g oo ah HOL, 20 g superfosphate iyo 10 g of potassium sulfate ayaa loo baahan doonaa. Guga, si loo kiciyo koritaanka caleenta aad u baahan tahay si aad u samayso Bacriminta nitrogenous.
Tani, isku dar ah waxaa loo diyaariyey: 10 l oo biyo ah iyo 50 g oo amooniyam ah, baadiyaha ah waxaa laga shubay waraabinta oo leh baadiyaha xagga kor ku xusan si loo sameeyo isku dhafka isku dhafka ah ee caleemaha iyo dogob. Marka xigta, ciidda agagaarka jirkeeda waxaa lagu daboolaa ash alwaax (1 tbsp ah baadiyaha) iyo dabacsan.
Gooyadu waa daryeel qasab ah oo qasab ah inta lagu jiro nolosha baadiyaha. Iska yaree waa lagama maarmaan xilliga dayrta iyo gu'ga. In dhirta dhalinyarada ilaa 3 sano, laamaha qalfoof waa la gooyaa by kala badh, iyo koritaanka xidid ku dhowaad gebi ahaanba gooyay.
Dhirta laga bilaabo 4 sano iyo ka weyn, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dhammaan laamaha cillada ah: daciif ah, waxyeelo leh oo la qalajiyey, si aan habooneyn u koraya. Lama oggola in la dhimo laanta. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ka soo bixiso laan ka weyn 5-6 sano, maadaama aysan jirin wax dalag ah.
Manjooyin dayrta waxaa la fuliyaa ka dib markii caleenta uu hoos u dhacay, guga - ka hor inta aan la gooyin. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa manjooyin xagaaga si kor loogu qaado fruiting iyo size of berry. Tani, dushooda caleemaha cagaaran waa la gooyaa si ay u leeyihiin 5-7 caleemo.
Baro sida loo sameeyo manjooyin miro-bax oo dayrta.
Invicta waxay u dulqaadataa qabowga qabowga si aad u fiican. Laakiin jiilaalka si guul leh wuxuu u qalmaa in uu sameeyo shaqo diyaarin ah:
Marka hore, gooyaa qalalan, waxyeello, isku laaban ama jiifsan on laamaha dhulka, ka saar caleemo dhacday.
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad ku shubato meelo badan oo asal ah oo xoqaya carrada.
Daryeel ka hor inta dhaxan waa mulching si fiican looga hortago in lagu keydiyo oo xididdada. Sida mulch ee jiilaalka, waxaa fiican in la isticmaalo humus ama peat leh daaha of 10-15 cm.
Marka barafku hoos u dhaco, saldhigga hoose ayaa lagu dabooli karaa lakab 10 cm, haddii xilliga qaboobuhu uu barafaysan yahay, laakiin aan baraf lahayn, waxaad isticmaali kartaa waxyaabo kasta oo daboolan si loo ilaaliyo xididada.
Waa muhiim! Caleemaha jabay oo la gooyaa laamuhu waa mid aan loo baahnayn inuu isticmaalo mulch iyo wax daboolan. Cayayaanka, bakteeriyada iyo fungi waxay ku dhaafi karaan iyaga, iyo guga ayaa ku faafaya inta ka hartay duurka. Waxa ugu wanaagsan in la isla markiiba gubo caleenta iyo laanta la ururiyey.
Guud ahaan, kala duwanaanshahan waxay helayaan dib-u-eegid wanaagsan, taas oo aan la yaab lahayn, sababtoo ah tirada faa'iidooyinka waxay ka weyntahay dhibaatooyinka yar yar:
Kala duwan waa mid sarreeya. Miraha waa kala duwan yihiin cabbirkooda weyn, dhadhanka ugu fiican, jilicsanaanta iyo gaadiidka, kala duwanaanta isticmaalka.
Dhirta ayaa hoos u dhigaya daryeelka.
Xayawaanka waxay u dulqaadanayaan qaboobaha adag.
Gooseberry waxay u adkaysatay xagta uumiga budada ah iyo cudurrada badankood ee caadiga ah ee dalagyada beeraha.
Maqnaanshaha suurtagalka ah waxaa laga yaabaa inuu noqdo dareenka abaarta, iyo sidoo kale joogitaanka maqnaashaha weyn. Si kastaba ha noqotee, qofka dambe ayaa loo yiraahdaa qulqul weyn - qashinka waxaa loo habeeyaa si aan caadi ahayn, sidaa daraadeed ma abuuraan dhibaatooyin culus marka la goosanayo gacanta.
Kala duwanaanshahani waa mid aad u fiican oo kor u kici kara goobtiisa. Iyadoo daryeel yar, "Invicta" horeba sannadka labaad ayaa ku farxi doona goosashada taajirsan ee miro ballaaran oo dhadhan fiican leh. Kala duwanaanshuhu waa mid aad u wanaagsan dadka aan lahayn khibrad hore oo ka mid ah gooseberries sii kordhaya.
Video: dabeecadaha kala duwan ee "Invicta"
Muuqaal kale oo miro ah "Invicta": dib u eegis
waxay ku qaadataa darajo isku mid ah.
Berry waa weyn, laakiin sida culeyska sida cad u baahan tahay quudinta.
Xilligan, duurka u leh berry. Waxaan u maleynayaa in toddobaad gudaheeda ay suurtagal noqon doonto in la soo qaado miraha ugu horreeya ee bislaaday. Cudurada muddo 3 sano ah ma aysan dareemin. Fungicides ma qaban xitaa hal mar.
Berry xayawaan yar leh oo leh caraf udgoon leh, caraf udgoon.
Kala sooc sida. Waxa kaliya ee aad u adag. Aad u badan
Xaqiiqo xiiso leh, kahor intaa in dhadhankiisu ahayd mid caadi ah, ma aha malab iyo aan lahayn dhanaan. Waxaa la qorsheeyay in la beero sanadkan. 100 qeybood oo caan ah ayaa la beeray, kama cabanin dhadhanka, waxay u bixisaa bulk.
Antonin sabiib ah